FAQs - Dongguan JinRong Aliminum Products Co., Ltd
Aluminium Profiles (OEM / Machining)
Extruded Aluminium zabucala
Iiprofayili slot Industrial
Iinkangeleko Industrial Non-Standard
Aluminium Izahlulo oksijini
Aluminium Ukunyathela Parts
LED Iiprofayili isibiyeli Tube
Parts Aluminium Small
Malunga Ukwenza zesampulu
Malunga Indawo an Order
Malunga OEM Aluminium Parts
Malunga Service Machining
Malunga Quality Control
Malunga Aluminium Package
OEM Aluminium zabucala
Ingaba umzi-mveliso okanye inkampani a? Kuba andinokwazi kum inkonzo yakho?
Singabantu mveliso ethe ngugqirha imveliso aluminiyam processing iminyaka engaphezu kwama-10, ezifana izinto mveliso non-esezantsi, aluminiyam bexhentsa iindawo, aluminiyam igcwala, ubushushu iyatshona, aluminium Screw njl
Yintoni amathuba akho nenkqubo ukuze? Ingaba ikhona na MOQ kufunekayo?
Sinikeza inkonzo OEM lwenkqubo aluminiyam kunye ixabiso imboni arcade games. Inkqubo oda ukuba uthumele umzobo kuthi, yaye siza uhlalutyo umzobo yakho quote kuwe ngokusekelwe MOQ ukuba ungabaveleli. (No MOQ efunekayo, kodwa ixabiso ubuninzi ezincinci ziza kuba ngaphezu komthamo wazo enkulu)
Njani na iwaranti kolawulo iimveliso ezisemgangathweni?
Thina ubambe nsinya umgangatho ukulawula ukusuka ekuqaleni ukuya ekupheleni kwaye zijolise kwi-100% Impazamo free. Nawe ungacela ukuba inkonzo yabathengi emva-kwintengiso ukuba kukho nayiphi na ingxaki. Yonke imiyalelo kufuneka kudlule isebe lethu QC phambi ekuthuthweni.
Ingaba ukunikeza iisampulu? Ngaba simahla okanye ezingaphezulu?
Ewe, siya thembisa isampuli for intlawulo simahla kodwa musa ukuhlawula iindleko impahla, kunye nenjongo lokuthumela iisampuli kuni zokutshekisha iimveliso zethu ezisemgangathweni kunye nenkqubo nobuchwepheshe.
kungenzeka njani le nkqubo ukuba kufuneka wenze kwase?
Ukuba une imizobo okanye iisampuli, nceda uzive ukhululekile ukuba uthumele kuthi, basixelele iimfuno zakho ezizodwa ezifana izinto, ukunyamezelana, unyango komhlaba kunye nemali oyifunayo.
Ucinga ukuba athumele mveliso? ixesha wophathelo elide kangakanani?
Njengokuba kusenziwa isampula, ngokuqhelekileyo ke malunga 5 ~ 10 iintsuku, kodwa siwa ubungakanani kunye iimveliso complicated.We nga vaka kubo DHL, EMS njl Wona umyalelo enkulu ukuvelisa iimveliso, siya izohamba kubo FOB , ixesha unikezelo ngokusekelwe kwilizwe ongathanda ukuba athumele, kodwa kwiintsuku nama- 25 iintsuku.
le mveliso yakho ibekwe phi? njani i kububona?
inkampani yethu ibekwe Jiji Industrial kwindawo, Shanghe Village, Wangniudun Town, Dongguan City, owona mzi usondeleyo evela Shenzhen, Guangzhou, Hongkong.
Jiji Industrial Road, Shanghe Village, Wangniudun Town, Donguan City, Guangdong kwiPhondo, China
Tsalela ngoku: 0086 13713047317